DanAds: Teknụzụ Mgbasa Ozi Nke Onwe Maka Ndị Nkwusa | Martech Zone
DanAds: Teknụzụ Mgbasa Ozi Nke Onwe Maka Ndị Nkwusa
Fraịde, Machị 5, 2021 Fraịde, Machị 5, 2021 Persson onye
Programmatic mgbasa ozi (akpaaka nke ịzụ na ire mgbasa ozi n'ịntanetị) abụrụla ihe dị mkpa maka ndị ahịa nke oge a ọtụtụ afọ ma ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara ya. Ikike nke ndị na-azụ ahịa mgbasa ozi iji sọftụwia zụta mgbasa ozi agbanweela ohere mgbasa ozi dijitalụ, wepụ mkpa ọ dị maka usoro akwụkwọ ntuziaka ọdịnala dịka arịrịọ maka atụmatụ, ntinye aka, nkwupụta, yana, ọkachasị, mkparịta ụka mmadụ.
Usoro mmemme mmemme nke ọdịnala, ma ọ bụ mgbasa ozi mmemme na-achịkwa ọrụ dịka a na-akpọ ya mgbe ụfọdụ, ekwela ka ndị mgbasa ozi nakweere a set ma chefuo omume. Agbanyeghị, n'agbanyeghị na-eweta ọkwa dị jụụ na akpaaka maka ụlọ ọrụ ọ bụla nha na-achọ ịkpọsa azụmaahịa ha, a na-akatọkwa ya mgbe niile maka enweghị nghọta ya. Site na mgbasa ozi mmemme na-ejikwa ọrụ, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ego onye na-ebipụta akwụkwọ na-eme na-abụkarị nke a na-akpọ ndị nnọchi anya n'usoro inye ngwaahịa, dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ na tebụl ahịa, nke onye nkwusa na-enweghị itinye aka na ya. Enweghị njikwa na nghọta na -emepụta adịghị ike na ngwongwo na-eweta ma na-ebelata ikike ịzụta nke onye mgbasa ozi yana uru nke onye mbipụta akwụkwọ.
Site n'echiche onye mgbasa ozi, usoro mmemme anaghị adịcha mma n'ihi na anaghị ekwe ka azụmaahịa mara nke ọma ebe mgbasa ozi ha ga-agwụ, ma ọ bụ ụdị ọdịnaya ọ ga-egosipụta n'akụkụ. Nke a akpalitela arụmụka kpụ ọkụ n'ọnụ gbasara nchekwa nchekwa n'ime mgbasa ozi dijitalụ n'afọ gara aga, echiche zuru ezu bụ na ọ bụ usoro okike na-ezighi ezi nke kwesịrị ịgbanwe iji nweta ọdịnihu na-aga n'ihu maka mgbasa ozi n'ịntanetị.
Nke a bụ ebe ọrụ onwe onye na-abata site na ịkwụ ụgwọ maka ndị na-ebipụta akwụkwọ na imeghe ụwa nke mgbasa ozi dijitalụ na obere na azụmaahịa, na-eme ka a hụkwa na obere usoro mmefu ego na-aba uru maka onye mbipụta akwụkwọ - niile na nchekwa gburugburu ebe obibi.
DanAds: Anata Ukwuu Share Of Ad Revenue Na Democratize The Space Site akpaaka
DanAds na-enye azịza mgbasa ozi onwe onye na-acha ọcha na nke a na-emezi ahazi, nke, n'adịghị ka ngwọta ọrụ a na-achịkwa, na-enye ndị mgbasa ozi ohere ịbanye na enweghị mmachi na mkpọsa ha. Nke a pụtara na ndị mbipụta nwere ike inyeghachi onye na-etinye iwu ahụ ikike zuru oke, na-enyere ha aka iwulite mgbasa ozi ha, dozie mmefu ego nke aka ha, nyochaa nsonaazụ 24/7, ma gbanwee ọdịnaya niile na ntanetị ntanetị.
DanAds na-arụ ọrụ na ndị nkwusa ọdịnala dịka Hearst Magazines na Bloomberg Media Group iji gbakwunye uru na ọkwa ọ bụla nke usoro ịzụ ahịa mgbasa ozi. A na-enweta nke a site na ịmepụta ahịrịokwu dị n'etiti onye mbipụta akwụkwọ na onye mgbasa ozi, na-eme ka ọ bụrụ uzo zuru oke, nkwụsị nkwụsị nke na-enyere akpaaka aka na arụmọrụ niile, ahịa, na njikwa ihe okike. Ọ na-ahụkwa na ndị na-ebipụta akwụkwọ na-enweta oke akụkụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi karịa ka ha ga-enweta site na ịzụ ahịa ọdịnala, nke na-abụghị nke nghọta. N'aka nke ya, nke a na-eme ka ndị na-ebipụta akwụkwọ akụkọ, AdOps, akaụntụ, na ndị ọrụ njikwa belata ka ha nwee ike lekwasị anya na ọrụ ndị ọzọ dị oke mkpa ma na-agbakwunye uru nke na-emetụta ala.
DanAds abụghị naanị maka mbipụta ọdịnala na mbipụta dijitalụ. DanAds na-arụkọkwa ọrụ ụfọdụ nnukwu UGC (ọdịnaya sitere na onye ọrụ) dị ka Tripadvisor, SoundCloud na Roku, na-enyere ndị azụmaahịa aka ịme mkpọsa mgbasa ozi onwe ha na vidiyo, redio, na, n'ihi nsonye na nso nso a Egwuregwu, mgbasa ozi mgbasa ozi, kwa.
Ihe omumu dika - Onye ndu ndi ndu Media:
Ezigbo ihe atụ nke ebe DanAds 'teknụzụ na-ahụ maka ọrụ onwe onye nwere ihe ịga nke ọma n'ịgbakwunye uru maka ndị mgbasa ozi bụ na Tripadvisor, usoro njem njem kachasị ukwuu n'ụwa, nke malitere Onye njikwa ihe ntanetị Tripadvisor DanAds kwadoro na 2019.
Onye nlekọta atọ nwere nnukwu uru ahịa dị ukwuu maka ndị mgbasa ozi. Agbanyeghị, isi uru bara uru dị na ike ya maka ịhụ ndị mgbasa ozi n'ihu ndị ahịa mgbe ha nọ na-eme atụmatụ na ịzụta njem ha site na weebụsaịtị. N'ihi ya, e wuru usoro ikpo okwu nke onwe ya iji gosipụta nke a.
DanAds nwere ike iwulite ihe eji eme ihe banyere onwe ya na ihe di iche iche di iche iche, na enyere ndi oru mgbasa ozi ohere ichota, ma weghachite ndi njem nke Tripadvisor site na njedebe, usoro omume, ma obu mba, ihe puru iche na ikpo okwu. Site n'ime ka nke a bụrụ ihe ngosi dị ukwuu nke ikpo okwu, yana atụmatụ na-apụta n'isi oge ntinye akwụkwọ, ọ nyerela aka mee ka atụmatụ mgbasa ozi a gbakwunyere na onye mgbasa ozi wee nyere ha aka itinye ma na-agba ọsọ mkpọsa dị mma nke ezubere iche na ndị na-ege ntị na Tripadvisor.
Etu esi eji Tripadvisor Media Manager
Mepụta akaụntụ - Mgbe ndị mgbasa ozi debanyere aha na Tripadvisor Media Manager, a na-enye ha nhọrọ ịdebanye aha dịka onye mgbasa ozi ziri ezi (yabụ azụmahịa ma ọ bụ onye ọ bụla) ma ọ bụ dịka ụlọ ọrụ (maka ndị mgbasa ozi na-enyefe mgbasa ozi ha na ndị ọzọ).
Bido Mgbasa Ozi - Ozugbo e mepụtara akaụntụ, ndị mgbasa ozi ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike ịtọ ma jikwaa usoro mkpọsa, mmefu ego, na ebumnuche, nke nwere ike ịdị obosara ma ọ bụ granular dabere na mmasị onye ọrụ. Enwere ike ịhọrọ ebumnuche dabere na ụdị njem, koodu zip, obodo ma ọ bụ steeti, ma ọ bụ site na nwoke, afọ, ma ọ bụ mmasị (dabere na isi okwu).
Mee na / ma ọ bụ bugoo ihe okike okike - N'ebe a, ndị ọrụ nwere ike bulite ihe okike okike dị ugbu a, ma ọ bụ wuo nke ha ozugbo n'ime ikpo okwu site na iji ngwaọrụ amamịghe nke na-eme ka ọ dị mfe ịmepụta mgbasa ozi mara mma.
Bulite Creative Asset
-Ewu gị Creative Akụ
Họrọ usoro ịkwụ ụgwọ ma nyefee - Ozugbo onye ọrụ ahụ nwere obi ụtọ na mkpọsa ahụ, a na-enye ha nhọrọ ịhọrọ mmefu ego ma họrọ mmalite na njedebe ụbọchị mkpọsa. Ego ịkwụ ụgwọ nwere ntụkwasị obi ma nwee ike ịme site na kredit ma ọ bụ kaadị debit, ma ọ bụ site na ọnụahịa. Enwere ike nyochaa mkpọsa site na nchịkọta dọkụọd na enwere ike ịme mgbanwe n'oge ọ bụla iji melite arụmọrụ ma nweta ebumnuche mgbasa ozi.
Akpụrụ ntinye akwụkwọ zuru oke nke DanAds na-enyere ndị azụmaahịa, ndị ukwu na ndị nta aka, ịmepụta mkpọsa mgbasa ozi bara uru ma zube, na nghọta zuru oke nke ebe ego ha na-aga.
Na nkenke, uru nke iji DanAds ihe eji enyere onwe gị aka gụnyere:
Chọta mmefu ego dị ala
Belata ọrụ maka ndị nkwusa Ad Operations na Ahịa otu
Onyinye ego ọhụrụ
Ọrụ ndị ahịa ngwa ngwa 24/7
Belata ọnụọgụ ahịa ndị ahịa
Ahụmịhe ndị ahịa emelitere
Na-enye ndị nkwusa ohere ịchịkwa oke ọnụọgụ nke ngwa ahịa ha
Na-enye ndị nkwusa ohere ịnweta nnabata na data nke otu mbụ ha
Iji kọwaa ya, DanAds na-ebelata oke ọrụ AdOps site na ihe karịrị 80% ma na-enyere aka ịlụso nnukwu ihe mgbochi ịbanye maka obere na azụmaahịa azụmaahịa nke ọtụtụ ndị gosipụtara mgbe ha na-ele anya iji kpọsaa na otu mbipụta ma ọ bụ ndị na-ege ntị pụrụ iche nke onye mbipụta aha ya ga-enye.
N’akụkọ ihe mere eme, ọtụtụ nnukwu ndị nkwusa ekwesịrị ịjụ azụmaahịa mmefu nke obere n’ihi na ọ dị oke ọnụ ijikwa iwu ma e jiri ya tụnyere ego ọ na-eweta. Ajuju ndi mgbasa ozi pere mpe na-acho ikwalite ahia ha tupu ha enweta ohere isoro onye ahia ahia.
N'ihi nke a, nke a emeela ka ọtụtụ obere ụlọ ọrụ pere mpe nwee ike ịnweta mgbasa ozi n'ịntanetị na mpụga nhọrọ ha nwere site na ndị ọrụ ntanetị dị ka Google na Facebook. Site na iji ndozi ọrụ onwe onye dị ka DanAds, ndị nkwusa nwere ike ịnabata mgbasa ozi ewepụtara site na azụmaahịa ndị pere mpe ma pere mpe ma nọgide na-aba uru. Anyị maara site na data anyị jidere n'ime ya, maka ndị na-ebipụta akwụkwọ na-eji DanAds, ndị otu Ad Ops na-echekwa ihe ruru 85% nke arụ ọrụ kwa otu. Ebumnuche abụghị iji dochie ndị na-ere ahịa, n'ezie. Mana oge a ịchekwaa na-abara onye nkwusa uru dị ka Ad Ops na ndị na-ere ahịa nwere ike ibugharị ya ka ọ lekwasị anya na ọrụ ịnata ego dị ka ịgbanye nnukwu akaụntụ na ịkwalite mkpọsa na-aga n'ihu, kama ịtinye data, ịpị ọnụ ọgụgụ, na izipu akụkọ.
Peo Persson, CPO, na ngalaba-nchoputa nke DanAds
Mgbasa ozi onwe onye na-elekwasị anya na democratizing ihe dị ogologo oge nke enweghị agbụ na nke mechiri emechi, mepee ụzọ ndị ọzọ na-enweta ego maka ndị na-ebipụta akwụkwọ ọdịnala, ma hụ na onye mbipụta ahụ na-achịkwa arụmọrụ na data niile, karịa ndị ọzọ. Nke a dị mkpa karịsịa ka ụwa na-agbanwewanye n'ịntanetị. DanAds nọ n'ọnọdụ zuru oke iji nyere aka mee ka njide nke akpaaka na oghere mgbasa ozi, na-eme ka nnabata nke iwu kwadoro maka ndị mbipụta yana, nke kachasị mkpa, chekwaa azụmaahịa na ndị mbipụta oge na ego.
Maka Ozi Ndị Ọzọ, Kpọtụrụ DanAds
Tags: arụmọrụ adikpo okwuna-akwadomgbasa ozi mgbasa oziNdubuezeegwuregwuPersson onyemgbasa ozi mmemmendị nkwusaafọọrụ onwe-mgbasa ozimgbasa ozi ọrụ onwe onyeSoundCloudkpugheereihe njirimara nke onye ọrụocha-ikpo okwu ad n'elu ikpo okwu
Peo bụ onye na-azụ ahịa ahịa dijitalụ nke nwere ndabere na ndụmọdụ, ịzụ ahịa. Tupu ịmalite ntọala DanAds na 2013, ọ nwere ọtụtụ ọrụ ndị isi na mgbasa ozi na ụlọ ọrụ IT nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri nke ahụmịhe na-arụ ọrụ na mgbasa ozi ọgbara ọhụrụ. Peo bụkwa akụkụ nke ndị otu ntọala Hybris Empire, ụlọ ọrụ mgbasa ozi dijitalụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.